मनुसासँग मिलन (कथा) | Suman Khadka
Suman Khadka Blogger
मनुसासँग मिलन (कथा)
Suman Khadka September 4, 2017	Leaveacomment 93 Views
मनुसासंग बिदा मागेर आए देखी मेरो मनमा छट्पटि सुरु भयो । छिनमा उ संग भएको भेटले खुसीको बहार छाउँछ त छिनमा उ म बाट किन टाढा गएकि हो भन्ने प्रश्नले घेर्न थाल्छ । रात सुनसान छ तर मेरो मनभने अनेकन प्रश्नहरुको कोलाहलले अशान्त छ । एकदमै अशान्त । कोठा अँधेरो छ तर मेरो मन उज्यालोको किरणले चम्किरहेको छ । उत्सुकताको उज्यालो । आँखा बन्द गर्छु मनुसालाई देख्छु, आँखा खोल्छु उसैलाई हराउँछु अनि देख्छु कालो निश्चलता । आँखा बन्द नै गर्छु किनकि बन्द आँखामा मनुसालाई खुल्ला रुपमा पाउँछु अनि उसैसंग रुमलिरहन्छु । १२ बजिसक्यो निद्रा लागेन । उठेर चिया बनाएँर पिउन थालेँ । दिउसो उसले बनाएर पिलाएको चियाको स्वादले गर्दा होला आफैले बनाएको चियाको स्वाद एकदमै फिक्का लाग्यो र त्यतिकै छोडिदिएँ । झ्याल बाहिर माथि आकाशमा फाल्गन शुक्लपक्षको अर्धचन्द्र थियो । मलिन र निस्तिस कुनै थकित अनुहारजस्तो । मनुसा र उसको अनुहार बारम्बार आइरहे । उ निश्चित रुपमा अशान्त थिई । ब्यतिथ थिई ।
फेरी निदाउने प्रयास गर्छु । फेरीपनि उहीं क्रिया दोहरीयो । अनि सोचेँ के उसलाई पनि मलाईजस्तै छट्पटि भइरहेको होला यतिबेला ? के उसलेपनि मेरैबारेमा सोचिरहेकि होली ? एकाएक उ संग बोल्न मन लाग्यो र मोबाइल हातमा लिएँ अनि मात्र याद आयो मैले आफ्नो नम्बर उसलाई दिएँ तर उसको नम्बर नै लिन भुलेछु । खैर केही छैन भोली त उ संग भेट हुनेछ म किन यसरी हतारिएको ? आफैलाई सम्हालेँ र सोचेँ यदि उसलाइपनि मलाइजस्तै छट्पटि भइरहेको छ र यतिबेलासम्म जागै बसेकि छ भने पक्कै मलाइ म्यासेज लेख्नेछे र पठाउनेछे ‘शुभरात्रि’ भनेर ।
मोबाईलको रिङ बज्यो । निद्रा एकाएक खल्याङबल्याङ भयो । आँखा मिच्दै मोबाईल हेरेँ शौरभले गरेको रहेछ । एकाएक मनमा आएको उत्सुकता हराएर गयो । फोन रिसिभ गरेँ ।
‘ओई सुरज, के हो पारा ? फोन आएको पनि थाहा पाउँदैनस् ? कतिखेर आउछस् तलाई कुर्दा कुर्दा हामी थाकिसक्यौँ…’
मैले हेलो भन्न नपाउँदै सारा प्रश्नहरुको थुप्रो थुपारिदियो म माथि शौरभले । उसले गरेका प्रश्नहरुकोे उत्तर दिनुभन्दा पहिले कानमा टासिएको मोबाईल तल झारेर घडि हेरेँ । एक्कासी झस्किएँ । आँखामा रहेको बाँकि निद्रा एकाएक दुर भयो, मानौ निदाइरहेको बेला कसैले चिसो पानी खन्याईदिएझैँ आभास भयो । साढे आठ बजे अफिसमा मिटिङ थियो तर घडि हेर्दा ९ बजेर १८ मिनेट गइसकेको थियो ।
‘शौरभ सुन् न, म बिरामी भएर आउँन नसक्ने भएँ यार बरु त्यस्तो केहि प¥यो भने फोन गर न है सरलाई पनि यहि कुरा भन्दे ।’
मेरो मुखबाट उसको प्रश्नको बनावटी उत्तर फुत्कियो ।
‘के भयो एक्कासी तलाई ? हिजो सम्म ठिक थिइस् त ?’
‘सायद चिसोले होला, एक्कासी भइदियो ।’
‘ल ल उसोभए रेस्ट गर् म दिउसोतिर आउँछु ।’
फोन राखिसकेपछि मेरा आँखा एक्कासी ३ मिस्डकल र १ म्यासेज लेखिएको ठाउँमा गएर रोक्किए । हतार हतार गरेर हेरेँ, अनसेभ नम्बर देखिएन जहाँ ३ ओटै मिस्डकल र एउटा म्यासेज शौरभकै नाममा सेभ थियो । बल्लतल्ल मनमा छिरेका आशाका किरणहरु बाक्लो, कालो बादलले छेकिदिएझै गुमनाम भए । उठेर फ्रेस भएँ । जहाँ जादा पनि मोबाइल साथमै रहन थाल्यो । आशा थियो त्यो मडारिरहेको कालो बादल छिट्टै हट्ने छ र उदाउँनेछन् सुनौला रेशाहरु मनुसाको मिठो स्वर संगै । १० बज्यो त्यो बादल हटेन । खाना पकाएँ खाएँ साढे ११ बज्यो अझैपनि फोनको आएन । एकछिनपछि फोनको रिङ बज्यो । स्त्रिनमा अनसेभ नम्बर देखियो । हतार हतार फोन रिसिभ गरँे र बोलेँ-
‘हेलो, मनुसा ?’
‘हेलो सर म बाइक रिपेरिङ सेन्टरबाट, हजुरको बाइक रेडि भयो तपाई आएर लिन सक्नुहुन्छ ।’
हत्तेरिका, यसलाइ पनि अहिलेनै फोन गर्नुपरेको ? अलिकति रिस उठ्यो ।
‘ल ल म एकैछिनमा आएर लिन्छु ।’
अलिकति रिस र अलिकति लाज मिश्रीत स्वरमा भनेँ ।
‘हवस् सर् ।’
यति भन्दै उसले फोन राख्यो ।
मन औडाह भयो ।
१२ बजे सम्म पनि फोन नआउँदा एकमनले भन्यो
‘किन फोनको पर्खाइमा बसेको ? उसकै घरमा जा न ?’
फेरी अर्का मन बोल्यो,
‘हैन उसले फोन गर्नेछे यहिँ बस् ।’
यहिँ मनको कुराले दोधरमा परिरहेको बेला फोनको रिङ फेरी बज्यो । रिसीभ गरेँ ।
एक्कासी आँखा बन्द भए । आँसु बरर झरे । मन शान्त भयो । सायद उसको फोन पर्खदा पर्खदा थाकेका आँखाले पनि शान्त महसुस् गरे होलान् र अशान्तिका बादल पग्लिएर थोपा थोपा बनि आँखाको डिलबाट झरे होलान् ।
‘म नै हो भन्ने कसरी थाहा पायौ ?’
उसले अचम्मित हुदै भनी ।
‘जसको आवाज हरेक पल यो मनमा गुञ्जिरहन्छ उसको स्वर चिन्न सक्दिनँ होला मैले ?’
अनायासै फुत्किएछन् यि शब्दहरु, सायद मन झुट बोल्न मान्दैन थियो ।
‘भन, आज फ्रि छौ ? ४/५ बजे ?’
उसलाई मैले भनेको वाक्यले केहि फरक पारेनछ सायद । मनमा ग्लानी उत्पन्न भयो । र उस्तै लवजमा मैले भनें-
‘अँ, तिमी संग भेट्ने भनेर आज अफिस नगएको तर ४/५ बजे किन नि अलि छिटो भेट्न सकिदैन ?’
मलाइ भने उसलाई भेट्न हतार भईसकेको थियो । भित्तामा झुन्डिएको घडि हेरेँ, घडिको मोटो सुँई १ को पछि उभिएको थियो ।
‘हेरन, अहिले म बिजी छु त्यसैले ४ बजे भन्दा अगाडि समय मिलाउँन सकिनँ । भ्याउँछौ नि आउँन ?’
उसको औपचारिकता अगाडि म नतमस्तक भएँ र भनेँ ।
‘हुन्छ आउँछु, तर कहाँ भेट्ने ?’
मैले पनि औपचारिकता निभाएँ ।
‘हिमालयन जाभा कफी ठमेल ।’
‘ओके, आई वील बि दिएर ।’
‘ओके, सि यु दिएर । बाई ।’
फोन राखिसकेपछि मन हल्का भएको महसुस भयो । तर ४ बजेसम्म पर्खन मलाई निकै सकस् हुनेवाला थियो । के गरुँ ४ बजेसम्म ? तड्पिन थालेँ म । उसले साच्ची किन छोडेर गएकी होलि मलाई त्यतिखेर ? सोच्न थालें फेरी मनले भन्यो ‘३ घण्टा पर्खिन सक्दैनस ? अब त मनुसा सधै तेरो त हो नी । फेरी पहिलेको कुरालाई किन मनमा खेलाइरहन्छस् ?’ ‘हुनपनि हो उ त अब मेरै लागि त आएकी हो नी अब ३ घण्टा पछि सबै थाहा पाइने छ म किन हतारिएको ?’ मनले र मैले कुरा गरिरहयौ ।.
दिउसोको ३ बज्यो । म घरबाट निस्किएँर सोझै बाइक रिपेरिंग सेन्टर गएँ र बाइक लिएर ठमेलतिर दौडिएँ । पुतलीसडक पुग्दा बाइकले फेरी धोका दियो । स्टार्ट नै भएन । भर्खरै रिपेरिंग सेन्टर बाट ल्याएको एक्कासि के भयो ? रिस उठ्यो त्यो बनाउने मान्छे संग । फेरी आफैसंग पनि । किन्दा किन्दै त नया नै किनेको भए हुनेथियो यसरि धोका दिने त थिएन नी । मनुसालाई सम्झिएँ उसले पनि यसरीनै धोका दिएकी थिइ । मन भारि भएर आयो । मोबाइल झिकेर घडी हेरें । ४ बजेर २१ मिनेट गईसकेको थियो । वरिपरी ओर्कशप हेरें कहिँ दिखिएन । बाइकलाई डोर्याउदै बागबजार पुर्याएँ । बन्न अलि टाइम लाग्ने भएकाले म हिडेरै जाने निधो गरेँ । फोनको रिंग बज्यो मनुसाको थियो । रिसिभ गरें –
‘कहाँ छौ सुरज ?’
हेलो भन्न बित्तिकै उसको प्रश्न आयो ।
‘हेरन,आउँदा–आउंदै बाटोमै बाइक बिग्रियो अहिले हिडेर आउंदै छु । दरबार मार्ग पुगें तिमि पुग्यौ ?’
मैले पनि उत्तर सहित प्रश्न दोहोर्याएं ।
‘म पुगिसके । ल छिटै आउ है त, म पर्खन्छु यहि ।’
हुन्छ भनेर फोन राखें ।
बिचरी मनुसा एक्लै के गरेर कुर्ने होलि यत्रो समय मलाइ । बाइकसंग रिस उठ्यो । न यहाबाट ठमेल जाने गाडी पाउछ । हिडेर जादा कम्तिमा २०/२५ मिनेट लाग्छ ।
बागबजार हुदै घन्टाघर पुगें । टाउको माथि ठड्याएंर घडी हेरें । ४ र ५ को बिचमा मोटो सुइ सुतेको थियो । दरबारमार्ग सडक बिचमा ठड्याईएका पोलहरुमा क्रटिना कैफ मुस्कुराइरहेकी थिइ । मलाई मनुसाको अगाडि क्रटिनाको मुस्कान फिक्का लाग्यो । सडक वारि पारि शिरीषका रुखहरु नांगिएका थिएँ तरपनि सुन्दर नै देखिएका थिएँ । यस्तो लाग्यो, सुन्दर चिज जे-जस्तो अवस्थामामा भएपनि सुन्दर नै देखिन्छ । मनुसालाई सम्झिएँ, उ पनि त जस्तो अवस्थामा पनि सुन्दर देखिन्छे । बाटोभरी मान्छे र गाडीको चाप एकै किसिमको थियो । म लैनचौरतिर सोझिएँ । मनुसासंग भेट्ने खुसीले बाटो कटेको पत्तै हुदैन थियो । मनमा अनेकन कुराहरु खेले । जित्ने, हार्ने कुनैपनि कुराहरुको निश्चित थिएन । के मनुसाले फेरी मेरो मनमा उमंग छर्ने छे ? के उ म संग बिहे गर्ने छे ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु दोहोरिरहे मनमा, म अन्जान भएर चुपचाप हिडिरहें ।
हिमालयन जाभा कफी, ठमेल । सिडि चढेर पहिलो तल्लामा पुगेँ । आकाशले सूर्यास्तको पहिरन पहिरिरहेको थियो । त्यसैले होला सिसाले बारिएको बाहिरी कोठाभित्र घामका पहेंला रेशाहरु कोठाभरि छरिएका थिए । घाटीमा क्यामरा झुन्ड्याईरहेका कुइरेहरु पश्चिमतिर क्यामरा बटारिरहेका थिए । टेबलहरु भरिभराउ थिए गोरा अनुहारले । तीमध्ये केहि जोडीहरु मस्किरहेका थिए एक अर्कासंग भने केहि औपचारिकता निभाईरहेका थिए । हुनत त्यहाँ पहिला पनि जुत्ताको छाप नबसाएको होइन तर ति जुत्ताको छाप मेटिसकेका थिए मात्र एकहुल याद बाहेक । आज फेरी पाईला टेकेको छु तर पहिलेभन्दा नितान्त फरक आभास पाईरहेको छु । मनमा एक किसिमको उमंग छाएको छ । अनुहारभरि हर्षको लाली पोतिएको छ । आखाँभरी खुसीको बहार छाएको छ । खुट्टाहरु हलुङ्गो भएर हिडिरहेका छन् । त्यो कोठामा भएका गोरा विदेशी अनुहारसंग मेरा आँखाले चिनेका अनुहार नदेखेपछि खुट्टाहरु सलक्क भित्र छिरे । आखाँ नझिम्काएरै वरीपरी फन्को मारेँ । बिचभागमा पुस्तकको पाना पल्टाउदै गरेकि एक युवतीकहाँ पुगेर मेरा आँखा टक्क रोकिए । किनकि त्यहाँ बसेकी युवती मेरा आँखाको तलाउमा सधैजसो पौडि खेलिरहन्थि र मेरा आँखामा जम्मा भएको आसुँ धमिल्याएर जान्थि म भने धमिलो आसुँ बगाईरहन्थेँ तर आज मेरा आँखा सफा पारीदिएकि छे र त उस्लाई प्रत्यक्ष देखिरहेको छु सायद त्यसैले होला उसलाई अत्यन्तै सुन्दर देखिरहेको छु । सुन्दर आखाँ । सुन्दर मुहार । यस्तो लाग्दै थियो उ सबै कुरामा पर्फेक्ट छे तर मायामा ?
‘हाइ मनुसा ।’
मनुसा बसेको सोफा अगाडी गएर बोलाएँ ।
‘हेलो सुरज ! बसन ।’
मुस्कुराउदै आफु अगाडिको सोफामा बस्न इशारा गर्दै भनि ।
‘तिमीले धेरै कुर्नुपर्यो है मलाई ? सरि फर द्याट ।’
बसिसकेपछि औपचारिकता निभाउदै भनें ।
‘हैन, खासै ढिला छैन तिमि आयौ खुसी लाग्यो ।’
पढ्दै गरेको बुक टेबलमा राख्दै भनि ।
‘दि भेजिटेरियन् ? बूकर इन्टरनेसनल प्राइज पाएको हो नी यो पुस्तकले । राम्रो छ ।’
मैले उसले टेबलमा राखेको पुस्तकतिर नजर झुकाउदै भनें ।
‘अँ राम्रो लागिरहेको छ । पढ्दै छु, । बरु सुनाउ तिम्रो कस्तो चल्दै छ जिन्दगी ?’
‘खै के भनौं बाचेकै छु अहिलेसम्म । सायद तिमि फेरी भेटिने छ्यौ भनेर होला ।’
उसको अनुहार मलिन भयो । मलाइ लाग्यो उसको चम्किलो अनुहारमा यो मलिन रंग पोतिएको सुहाउदैन, त्यसैले उसलाई कसरि खुसी पार्ने भनेर सोच्दै थिएँ वेटरले टेबलमा पानी राख्दा झस्किएँ ।
‘थ्याकं यु ।’
‘यु वेलकम सर ।’
मुस्कुराउदै वेटर गयो ।
‘ए साच्ची तिमीलाई एउटा गिफ्ट छ ।’
सानो ब्यागबाट एउटा पाकेट झिक्दै मनुसा बोलि ।
‘ला, मलाई त केहि ख्याल नै भएन गिफ्टको ।’
उसको गिफ्ट स्वीकार गर्दै ग्लानी भावमा भनें ।
‘हैन केहि छैन तिमि नै मेरो गिफ्ट हौ नी ।’
मनुसा हास्दै बोलि ।
(दुबैजना हास्यौ )
‘अहिले खोलौ कि पछी ?’
‘पछि नै खोल ।’
उसको भनाइलाई स्वीकार्दै मैले ब्यागमा राखें ।
‘कहाँ के गर्दै छौ आजभोली ?’
उ एकदमै खुलेर बोल्दै थिई जसले गर्दा मलाइपनि उ संग बोल्न सजिलो भैरहेको थियो ।
‘यतै एउटा एन् जी ओ मा काम गर्छु । अनि तिमि ?’
‘म पनि भर्खर एक हप्ता भयो काठमाडौँ आएको कामकै सिलसिलामा हेरौं कस्तो हुन्छ…?’
हल्का मुस्कुराउदै मनुसा बोलि । उ मुस्कुराउदा उसका लहरै मिलेका दांतका पंति घामले टलक्क टल्किएको कुनै हिमालभन्दा कम थिएन ।
म केहि बोल्न खोज्दै थिएँ उसको फोन बज्यो ।
‘एकैछिन ल … हेलो ? अँ हामी यहि माथि छौ माथि नै आउनुहोस् न ।’
‘को हो मनुसा ?’
‘एकैछिन है तिमीलाई सरप्राइज छ ।’
म एकदमै डराइरहेको थिएँ, त्यो बिचमा म केहि बोल्न सकिरहेको थिएंन । कतै बिहेको कुरा गर्न उसको परिवारबाट कोहि आउनुभएको हो कि ? कि उसको साथि होला । अनेकन कुराहरु मनभरी गुम्सिए । साच्ची कस्तो सरप्राइज दिदै छे त मनुसाले यस्तै सोच्दै थिएँ परबाट एउटा पुरुष आकृति हाम्रो नजिक बढ्दै थियो …
परैबाट हात हल्लाउदै उ बोल्यो । नजिक आइसकेपछि मनुसा उठेर उ संग अँगालो हाली । मेरो दिमाग शुन्य भयो । मसंग सोच्नलाई केहि शब्दहरु थिएनन् । मनुसाले म तिर इशारा गर्दै परिचय गराउदै भनि –
‘उ सुरज । सुरज, उहा मिलन, मेरो हजबेन्ड ।’
एक्कासि म बसेको सोफा भासिएको जस्तै भान भयो । पृथ्वी फनफनी घुमेजस्तै भयो । रिंगटा लागेजस्तै भयो । उसले हात बढाउदै भन्यो
मैले पनि थरथरी कापिरहेको हात अगाडी बढाउदै मलिन स्वरमा भनेँ
कफी आयो । पियौ । त्यो बिचमा के के कुरा भयो मलाई केहि याद भएँन । मलाई बस् मनुसाले भनेको ‘उहा मरो हजबेन्ड’ भन्ने शब्द हजार पटक गुन्जियो मनभित्र । अनेकन तरंग पसे । आफु के बोल्ने भन्ने पनि सम्हाल्न नसकी नसकी बोलिरहे । कुरा गरिरहें ।
‘ल सुरज भेट भयो खुसि लाग्यो अब हामि जान्छौ ।’
करिब १५ मिनेट जति कुराकानी भैसकेपछी मिलन उठेर हात अगाडी सार्दै भन्यो ।
मैले पनि हात मिलाउदै भनें ।
‘बाइ सुरज, आफ्नो ख्याल गर्नु ।’
मनुसा उठेर बोलि । म केहि बोल्न सकिनँ । उनीहरु गए । बाहिर निस्कनै लाग्दा मनुसा म तिर फर्कि र उसका शितल आखाहरुले मलाई हेरें । मैले बिदाइको हात हल्लाएँ ।
एकैछिन पछी म पनि उठेर हिडें । बाहिर निस्कदा सुर्यले डाडा काटिसकेको थियो र मनुसाले पनि । उसले दिएको गिफ्टको याद आयो खोलेर हेरें । त्यो त्यहि गिफ्ट थियो जुन मैले २ बर्ष पहिले उसलाई दिएको थिएँ आज फिर्ता गरेकी छे । मन भारि भैरह्यो । आखाको डिलभरि आशु भरिएं । त्यहि गिफ्ट संगै एउटा कागज थियो, खोलेर हेरें केहि कुरा लेखिएको थियो। पढ्न मन लागेन फ्याकिदिउँ ? फेरी, हैन पढ्छु भन्ने लाग्यो र हिड्दै पढ्न थालें –
प्रिय सुरज !
खै कसरि उतारू, मेरा पिडाका घाउहरु यो सेतो कागजमा ? उतारेपनि जस्ताको तस्तै उत्रिने रहेनछन् तरपनि म आफै पोखिन खोज्दै छु सायद म नै पोखिएं भने मेरा घाउ हरु केहि मात्रामा भएनी देख्न पाउने छौ र कहिकतै फरक रंग पनि पाउने छौ किनकि त्यो रंग म दुखेर मेरा नयन बाट झरेका अश्रुधारा हुनेछन र लेखेका शब्दहरुलाई फरक रंग दिनेछन ।
सुरज, म चाहन्थें तिमीसंग कहिलै भेट नहोस् किनकि तिमीसंग भेट भयो भने मैले आफुलाई सम्हाल्न सक्ने थिईनं । कसै गरि मैले आफुलाई सम्हालेपनि मैले आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सक्ने थिइनं । त्यस्तै भयो हिजो । मैले सोचेकै थिइनँ कि तिमीसंग यहाँ यस्तो अवस्थामा भेट होला भन्ने तर भयो यस्तै । जति टाढा जान खोज्यो उतिनै नजिकिन्छ यो मन तिमि संग तर पनि मैले आफुलाई सम्हालेरै बस्न चाहन्छु किनकि अब धेरै ढिला भैसकेको छ । चाहेर पनि भेट्न नसकिने अवस्थामा मा छौ हामि दुई।
सुरज ! त्यो दिन मलाइ थाहा नै थिएँन कि मलाइ लिन बाबा नै आउनुहुन्छ भनेर तर भयो त्यस्तै । केहि दिन अघिदेखि घरबाट छिटो आउ भनेर सधै फोनमा कराउनुहुन्थ्यो बाबा, ममी हरु । त्यसको खास कारण थियो मेरो बिहे । त्यो कुरा तिमीलाई त्यो केहि दिनभित्र धेरै पटक भन्न खोज्थें तर हिम्मत जुटाउन सक्थिनं । तिमीलाई माया गर्छु भन्न हिम्मत जुटाउने मान्छेले तिमीलाई मेरो घरबाट मेरो बिहेको दबाब आइरहेको छ भनेर भन्ने हिम्मत जुटाउन नसकेको कारण थियो मेरो इन्गेजमेन्ट, जो तिमीलाई थाहा थिएन । थाहा होस् पनि कसरि मैले नै नभनेपछी । यो कुरा थाहा पाउदा तिमि म संग पक्कै रिसाउने छौ सुरज, किनकि यस्तो कुरा तिमीलाई मैले सुरुमै भन्नुपर्ने थियो तर खै कसरि भन्न सकिन त्यो मलाइ अझैपनि थाहा छैन । जब म तिमीबाट टाढा हुदै थिएँ त्यो कुरा खुलाउन पनि सकिन र त्यसै तिमीलाई एक्लै छोडेर टाढा भएँ तर सुरज तिमीलाई म आज सबै कुरा प्रस्ट्याउदै छु । पढ्दा रिस उठ्ला म संग । तर यो चिठी पुरा नपढी नफ्याक्नु ।
(कुइरेको साइकलसंग ठोक्कीएछु
‘आर यु म्याड ?…के के बोल्दै थियो मैले सरि भन्दै पन्छिएं ।)
कुरा यो भन्दा ४ बर्ष अघिको हो मैले, त्यतिखेर मैले भर्खर ब्याचलर जोइन गरेकी थिएँ । त्यतिखेर एउटा कार्यक्रममा मेरो भेट मिलन श्रेष्ठ संग भयो उहाँ त्यो कार्यक्रममा सबैको आकर्षणको केन्द्र हुनुन्थ्यो भलै म कसरि छुट्न सक्थें त्यो हुल बाट । उहाँसँग कुराकानी भयो । कुरा गरेरै सबैलाई फिदा बनाइदिने उहाको बानीले म सुरुमै फिदा भएँ उहाप्रति । उहाले गर्ने कुरा लगाएत सबै कुरा मलाइ मन पर्दै गयो । फेरी भेट्ने कुरा भयो । भेटियो । अर्को भेटमै उहाँले म संग सिधै प्रेम प्रस्ताब राख्नुभो । म अचम्ममा परें । मैलेपनि सिधै हुदैन भनेर नकार्न सकिनँ किनकि उहाँ मेरो मन पर्ने मान्छे हुनुन्थ्यो । मन पर्दापर्दै पनि हुन्छ भन्न सकिन किनकि मैले उहालाई राम्रो संग जान्ने मौकानै पाएकी थिइनँ । अर्को दिन भन्छु भनेर म त्यहाबाट उम्किएँ र घरमा गएर उहाँकै बारेमा सोचिरहें भोलि आइसक्यो तर पनि के उत्तर दिने होला भनेर सोच्न सकेकी थिइनँ । जब उहाले फोन गर्नुभयो र के सोच्यौ भनेर सोध्नुभयो मेरो मुखबाट एक्कासि ‘हुन्छ’ भन्ने शब्द फुत्कियो । लजाउदै फोन काटें । त्यसपछि हाम्रो प्रेम सम्बन्ध प्रगाट बन्दै गयो ।
हाम्रो सम्बन्ध बिस्तारै साथीहरुलाई थाहा भयो । आफन्तजन हरुलाई थाहा भयो अनि घरपरिवारलाई पनि। बाबा ले धेरै गालि गर्नुभयो किनकि मैले थाहा पाएसम्म हाम्रो परिवारमा कसैले प्रेम बिबाह गरेको थिएनन् । म रोइ कराई गरेपछि बाबाले मिलन सहित उहाँको परिवारलाइ घरमा बोलाउनुभयो त्यहाँ एक्कासि बिहेको कुरा निस्कियो । दुवै परिवारको सहमति भयपछी इन्गेजमेन्टको मिति पक्का भयो । इन्गेजमेन्ट भयो । इन्गेजमेन्टको केहि दिन पश्चात उहाँ एउटा कार्यक्रममा १५ दिनको लागि अमेरिका जानुभयो । १५ दिन बित्यो आउनुभएन । महिनादिन बित्यो आउनुभएन । सम्पर्क बिहिन हुनुभयो उहाँ हामी सबै बाट । उहाँको अफिस र परिवारसंग सोध्दा कार्यक्रमबाट भागेको, कहिले आउने निश्चित नभएको सुन्दा म छाँगा बाट खसेजस्तै भएँ । परिवार भाबबिह्वल भयो त्यस्तै कयौं दिन बिते । महिना बिते । बर्ष बित्यो, उहा आउनुभएन । मेरो पहिलो बर्षको परीक्षा सकियो । मलाई त्यहाँ खुसि नदेखेपछि घरबाट मलाइ बाबाले काठमाडौँ ट्रान्सफर गरिदिनुभयो पढ्नको लागि । त्यहाँ फुपु कि छोरी संगै बसेर पढ्न थालें, पछी उहा बिबाह गरेर गएदेखि म फेरी एक्लै भएँ । त्यो एक्लोपन त्यतिखेरको हो सुरज जुन बेला तिमि भर्खर मेरो छिमेकी बनेर आएका थियौ । जब तिमि आयौ म मेरो एक्लोपनलाइ भुलाउन तिमीसंग नजिकिन थालें । थाहा थिएँन त्यसरी तिमीसंग एकदिन छिमेकी होइन तिम्रो प्रेमिका बनुला भनेर तर खै कसरि त्यो सब भयो मलाई थाहा छैन । सायद तिमि नै थियौ जसले मलाइ बुझ्न सक्थ्यो त्यतिबेला ।
(भुरुरु उडेर एउटा सुकेको पात मैले पढ्दै गरेको कागजमा अडियो । माथि हेरें नारानहिटी दरबार संग्राहलयकै छेउको रुख जसका धेरैजसो पातहरु झरेर रुख नांगिएको थियो । सोचे यो बोटका पातहरु झरेपनी फेरी नया पालुवा पलाएर उस्तै सुन्दर हुनेछ तर म ? चिठीतिरै ध्यान दिएँ ।)
कुरा तिमीलाई छोडेर आउनुभन्दा केहि दिन अघिको हो घरबाट बाबा ले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो “मिलन अमेरिकाबाट आउनुभयो अब छिटै साइत हेरेर बिहे गर्ने कुरा भाको छ भोलि नै घर आइज ।” एक्कासि उहाको कुरा सुन्दा म सक्ड भएँ । केहि बोल्न सकिन फोन राखे । एक्लै बसेर रोएँ । तिमीलाई यो कुरा कसरि सुनाउँ भन्ने सोच्दै सोच्दै दुइ दिन बित्यो र झन् नसोचेकै कुरा बाबा आएर मलाइ लिएर जानुभयो ।
घरमा मैले तिम्रो बारेमा भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । भनेपनि मान्नुहुने थिएन र मेरो मिलन संगै बिबाह भयो । बिबाहपछि उहाँ कामको लागि काठमाडौँ आउनुभयो भयो । म भने घर सम्हाल्दै, पहिले पढ्दै गरेको कलेजमा पढ्न थालें । एक वर्षपछी मलाइ काठमाडौँ नै जब मिलेपछि म पनि काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँ आएको १ हप्ता नहुदै हामि त्यसरी भेट हुन पुग्यौं जहाँ तिम्रो साथीको छिमेकीको रुपमा हामी बस्दै आएका थियौँ । संयोग पनि कस्तो हेरन तिमि हिजोको साटो आज त्यहाँ गएको भए मलाई कहिलै भेटाउने थिएनौ किनकि आज हामी त्यहाँ बाट अनेत्र सर्दै थियौं र सरिसक्यौं पनि ।
सुरज, जसरि हिजो हाम्रो भेट भयो त्यतिखेर मैले आफुलाई सम्हाल्नै सकिनं । किन किन तिमि संग एक्कासि नाजिकिएँ जब तिमीले “मलाई किन छोडेर गयौ” भनेर सोध्यौ मन गरुङ्गो भएर आयो, त्यतिखेर पनि भन्न सकिन । सायद तिमीलाई प्रतक्ष्य आँखा जुधाएर भन्न सक्ने थिइनँ र यो कागजको साहारा लिंदै छु ।
र अन्त्यमा, मैले तिमीलाई जे जति दुख, पिडा दिएँ त्यो सबको लागि म माफी माग्छु सुरज, आशा छ अब त पक्कै माफ गर्नेछौ मलाई । अनि अर्को कुरा, मिलनलाइ तिम्रो र मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा छ । बिहे पश्चात म केहि दिनसम्म खुसि नभएको देखेर उहाले सोध्नुभयो र मैले सबै कुरा भनेकी हुँ तर पनि उहाले आफै माफी माग्नुभयो र भन्नुभयो “म तिमीलाई सधै खुसि राख्नेछु ।” सायद उहाले यसको कारण आफैलाई दोषी ठान्नुभयो होला । मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाले । अब म सधै उहाकै अर्धा्न्गिनी हुँ र रहने छु । सुरज, सायद यो भेट नै हाम्रो अन्तिम भेट होला । तिमि हिजो जहाँ गएका थियौ त्यहाबाट हामि टाढा गैसकेका छौं । अब म हराइसकेकी छु तिमि खोज्ने प्रयाश नगर्नु ।
तिम्रो हुन नसकेकी
पुस महिनाको एक साँझ, चिसो एकदमै बढिरहेको थियो | सूर्य आफ्नो गन्तव्यको नजिकै थियो सायद …
Hello! Thank you very much for visit my blog. You can read the articles and compositions of my literary and contemporary topic written in Nepalese and English both language. Please do not miss the things you are looking for and to respond, because your response helps me further.
Happy New Year 2018 (Poem)
IDM 6.30 Build 1 Multilingual + Crack 2017 | 2018 (100% working)
Wondershare Filmora 2018 Registration Code | Serial Keys | Crack – (100 Free & Secure)
तिमीले छोड्दा (कविता )
(एउटा चोटिलो र समय सान्दर्भिक मुक्तक)
Arjun acharya: अस्तिनै देखि पढ्छु पढ्छु भन्दा पढ्ने मेसो नै पाएको थिएन ऐले पढे ✌ प्रसम्सा गर्ने...
Article Video Post Author World WordPress Tags Tag HTML PHP review mobile poem nepali poem Book Review story monitor Muktak samsung Gazal iphone imac apple blackberry galaxy
Design and Developed by Suman Khadka